China Ugboro abụọ n'ahịrị tapered ala biarin rụpụta na Factory | CMC
Tapered ala biarin na-ezo aka radial kpaliri Rolling biarin na tapered rollers. E nwere ụdị abụọ: obere cone angle na nnukwu cone angle. Obere cone n'akuku tumadi ebu mkpokọta radial na axial ibu dabere na radial ibu. A na-ejikarị ya eme ihe abụọ ma gbanwee nwụnye. Enwere ike itinye agbụrụ dị n'ime na mpụga iche. Enwere ike idozi radial na axial ikpochapu n'oge ntinye na ojiji; Nnukwu akwara taper bụ isi na-ebu axial na radial ibu dabere na axial ibu. N'ozuzu, anaghị eji ya ebu ibu axial dị ọcha naanị, mana enwere ike iji ya buru ibu radial dị ọcha mgbe ahaziri ya abụọ (njedebe nke otu aha ahụ arụnyere na ibe ya).
Mbanụ. Iburu Mba Dimkè
d D B T C N'arọ Kr Kor
1 2558 / 2523D 30.162 69.85 25.357 66.675 57.15 1.1612 122.3 Ogbogu Okonji
2 385 / 384D 55 100 21.946 52.388 42.862 1.465 138.9 205.8
5 Ugbokiri2020 25 52 Ogbe 18.5 37 37 0.365 60.7 Ogbe 78.6
6 NJ 2222 25 52 21.5 43 43 0.41 60.7 Ogbe 78.6
7 NJ 2222 25 55 21.5 43 43 0.496 Ogbe 74.5 97.8
8 NJ 2223 25 52 Ogbe 18.5 37 37 0.365 60.7 Ogbe 78.6
9 NXU 38037 38 70 Ogbe 18.5 37 37 0,544 64.3 94.9
10 JRM3535A / 65XD 35 65 Umuoji 17.5 35 35 0.508 61.3 87.1
11 JRM3535A / 65XDT 35 65 Umuoji 17.5 35 35 0,533 61.3 87.1
12 JRM3535A / 65XD-T 35 65 Umuoji 17.5 35 35 0,525 61.3 87.1
13 JRM3939 / JRM3968XD 39 68 Ogbe 18.5 37 37 0,522 64.3 94.9
14 T255545 25 55 Ogbe 22.5 45 45 0.5084 66 95.7
15 T255545A 25 55 Ogbe 22.5 45 45 0.5084 66 95.7
16 T255548 25 55 24 48 48 0,5246 66.0 95.7
17 T255548A 25 55 24 48 48 0,5246 66.0 95.7
18 NKU 606045 25 60 Ogbe 22.5 45 45 0.6662 66.0 95.7
19 MBA605A 25 60 Ogbe 22.5 45 45 0.6662 66.0 95.7
20 NKP-262 25 62 24 48 48 0,5941 93.4 Ogwe 125.1
21 T256248A 25 62 24 48 48 0,5941 93.4 Ogwe 125.1
22 NKM-532 27 53 21.5 43 43 0.4383 Ugwu 52.1 74.8
23 T295337 29 53 Ogbe 18.5 37 37 0.343 52.09 74.8
24 MBA-V 29 53 Ogbe 18.5 37 37 0.3424 52.09 74.8
25 T306248 30 62 24 48 48 0,5121 93.4 Ogwe 125.1
26 T46437 34 64 Ogbe 18.5 37 37 0,546 Ogbe 72.7 106.3
27 T356437 35 64 Ogbe 18.5 37 37 0,539 Ogbe 72.7 106.3
28 T356437B 35 64 18.5 / 24.1 42.6 37 0,5603 Ogbe 72.7 106.3
29 T356848 35 68 24 48 48 0.7784 96.2 Ogbe 138.2
30 T397237 39 72 Ogbe 18.5 37 37 0.662 73.0 105.0
31 T407237 40 72 Ogbe 18.5 37 37 0.644 73 105
32 T407237A 40 72 Ogbe 18.5 37 37 0.6592 Ogbe 68.1 102.9
33 NJ08045 40 80 Ogbe 22.5 45 44 0.97 110.3 143
34 T427639 42 76 Obochi 19.5 39 39 0.76 95.3 133.9
36 T458551 45 85 25.5 51 51 1.2686 99.28 144.7
37 NXU5551A 45 85 25.5 51 51 1.275 99.3 144.7
38 T478858 47 88 28.75 Ogbe 57.5 Ogbe 57.5 1.4928 126.8 N'afọ 191.9
39 T498448 49 84 24 48 48 Ogbe 107.2 168.6
40 NJ04545 50 84 27 54 54 1.178 107.2 168.6
44 445620 35 65 Umuoji 17.5 35 35 0,512 Ogbe 71.7 100
45 T306251 30 62 51 51 51 0.704 93.4 Ogwe 125.1
46 NJ08045D 40 80 Ogbe 22.5 45 44 0.97 110.3 143
47 MZF 40 80 Ogbe 22.5 45 44 0.97 110.3 143
Otu ahiri tapered ala nwere mgbanaka mgbanaka, ya mgbanaka na a set nke tapered rollers bụ ime mgbanaka nzukọ nchọ site nkata-ekara onu. Enwere ike ikewapụ mgbanaka dị na mpụga mgbako dị n'ime. Dị ka ISO tapered ala na-agba mpụga akụkụ ọkọlọtọ, ọ bụla ọkọlọtọ ụdị nke tapered ala na-amị elu mgbanaka ma ọ bụ n'ime mgbanaka nzukọ ga-enwe ike nweta mba na otu ụdị elu mgbanaka ma ọ bụ n'ime mgbanaka nzukọ mgbanwe. Nke ahụ bụ, na mgbakwunye na akụkụ mpụta na nnagide nke mgbanaka mpụga nke otu ụdị ahụ, nke ga-emerịrị ihe achọrọ nke ISO492 (GB307), akụkụ cone na cone diamita cone nke ihe mgbanaka dị n'ime ga-agbasokwa iwu ndị dị mkpa. maka mgbanwerịta.
Ohaneze, tapered n'akuku nke elu mgbanaka raceway nke otu-ahiri tapered ala amị bụ n'etiti 10 Celsius na 19 Celsius, nke nwere ike ibu jikọtara edinam nke axial ibu na radial ibu n'otu oge. Nnukwu ogwe cone, ikike ka iguzogide ibu axial buru ibu. Nta ya na nnukwu taper angle, tinye B na azu koodu, na taper n'akuku bụ n'etiti 25 Celsius ~ 29 Celsius, nke nwere ike ibu ibu axial ibu. Ke adianade do, otu ahiri tapered ala biarin nwere ike ịgbanwe size nke nwechapụ n'oge echichi usoro.
Mpụta mgbanaka (ma ọ bụ nke dị n'ime) nke okpukpu abụọ nke okpukpu abụọ bụ otu. Obere ihu njedebe nke mgbanaka abụọ dị n'ime (ma ọ bụ mgbanaka dị n'èzí) yiri nke ahụ, ya na spacer n'etiti. A na-agbanwe nwechapụ ahụ site na ọkpụrụkpụ nke spacer. The ọkpụrụkpụ nke spacer nwekwara ike-eji kpatụ pre-nnyonye anya nke abụọ-ahiri tapered ala agba.
Anọ-ahiri tapered ala biarin. Omume nke ụdị agba a bụ otu ihe ahụ dị ka nke nwere okpukpu abụọ na-agba agba, mana ọ na-ebu ibu radial karịa okpukpu abụọ nke okpukpu abụọ ma nwee ntakịrị ọsọ ọsọ. A na-ejikarị ya eme ihe maka igwe dị arọ.
Multi-kaa akara abụọ na anọ na-ahiri tapered ala biarin, ZWZ enye ogologo ndụ, multi-kaa akara abụọ na anọ na esepu tapered ala biarin. Mepụta usoro ọhụụ na nke ahaziri iche nke agba ahụ, gbanwee usoro nhazi ọdịnala nke mgbatị zuru ezu, ma were ụdị usoro mkpuchi ọhụụ nke jikọtara akara na mgbochi uzuzu iji meziwanye akara akara ahụ ma melite arụmọrụ akara. Tụnyere na-emeghe Ọdịdị biarin, multi-kaa akara abụọ na anọ na-ahiri tapered ala biarin nwere ike dịkwuo ndụ ha site 20% na 40% na belata mmanu oriri site 80%.
Nke gara aga: Ugboro abụọ n'ahịrị tapered ala biarin
Ugboro abụọ Ahịrị Ball agba
Ugboro abụọ Ahịrị Tapered ala biarin
Inch Ugboro abụọ Ahịrị
Usoro metrik abụọ
Taper ala agba Ndokwa, Ala Pin biarin, Nrụgide oru Roller biarin, Full Complement Ball biarin, Self-kwado Ball agba, Inch Single Ahịrị,